घरलाई नै विद्यालय बनाऔँ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
घरलाई नै विद्यालय बनाऔँ
जेठ २७, २०७८ बिहिबार १३:९:४७ | हरि ज्ञवाली
कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण लाखौँ विद्यार्थीहरू पुनः घरमै सीमित छन् । वार्षिक परीक्षासमेत दिन नपाएका ती लाखौँ बालबालिकाहरूमा परीक्षा दिनुपर्ने हो कि माथिल्लो कक्षाको तयारीमा लाग्ने हो भन्ने अन्योल अझै पूर्णतः हटिसकेको छैन । डेढ महिनाभन्दा बढी घरभित्रै कैद हुँदा फेरि उनीहरूमा मानसिक तनाव बढ्दो छ ।
मानसिक तनावमा बालबालिका
असारदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरू हुने भनिएको छ । तर एसईई र १२ कक्षाको जाँचबारे अझै अन्योल कायमै छ । लामो समयको निषेधाज्ञाले खेल्ने, चल्ने र विद्यालय जाने उमेरका कलिला बाल–बालिकाहरूलाई सबभन्दा बढी मानसिक तनावमा पारिदिएको छ । लामो समय घरभित्रै बस्नुको मानसिक पीडा र तनाव खपिसक्नु छैन । घरभित्रै छेकेर राख्दा चलिरहनुपर्ने चञ्चल बालस्वभाव कुण्ठित र निरश बनेको छ ।
खाऊँखाऊँ, लाऊँलाऊँ उमेरका बालबालिकासँग यतिबेला न पुस्तक छ, न त स्कुल नै । न साथी छन् ,न खेल सामग्रीहरू नै । न मनमा रमाइलो छ, न त शरीरमा स्फूर्ति । न अध्ययनमा लगाव छ न भविष्यप्रतिको कुनै आकांक्षा र योजना । छ त केवल कोरोनाको त्रास । आज यतिजना मरे, यतिजना संक्रमित भए त्रासद समाचार र निषेधाज्ञाको कोकोहाेलाे मात्रै । छरछिमेक, वरपर र आफन्तजनका दुःखद मृत्युका खबरले उनीहरूको बालमस्तिष्कलाई नकारात्मक असर परेको छ ।
बाहिर ननिस्क, हात धोइरहू, मास्क लगाऊ र सेनिटाइजर दल भन्ने एकोहोरो र पट्यारलाग्दो उर्दीबाहेक उत्प्रेरणामूलक खबर र हौसलापूर्ण कुरा उनीहरूले सुन्न पाएका छैनन् । साथीसँग भेटघाट गर्न, खेल्न, कुद्न र हाँसखेल गर्न नपाउँदाको त्यो अव्यक्त बालवेदना हामी वयस्कहरूले केवल अनुमान मात्र गर्न सक्छाैँ । अनुभव, अनुभूति र महसुस गर्न सक्दैनौंँ ।
आज उनीहरूमा पहिलेजस्तो न चञ्चलता देखिन्छ न त जिज्ञासुभाव नै । न शरीरमा कुनै स्फूर्ति छ न बालसुलभ नै । अरूसँग बोल्दा र नजिक हुन पनि सशंकित भएजस्तो । अध्ययनप्रति रूचि र उत्साह नै नभएजस्तो । निरीह र टिठलाग्दा जस्ता भएका छन् उनीहरू ।
मानसपटलमा अव्यक्तभाव, एकाङ्गीपन र हीनताग्रन्थी डम्म भरिएजस्तो । उनीहरू एकाङ्गी, अटेरी र जिद्दी बन्दैछन् । लामो समय घरभित्रै सीमित रहेका कतिपय विद्यार्थीले बोलाउँदा झर्कने, टोलाउने, रिसाउनेजस्ता आक्रामक व्यवहारसमेत देखाउन थालेका छन् । बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । मुलुकका भविष्यका कर्णधारमा आएको यो मनोदशा र दुर्दशाको मनोवैज्ञानिक उपचार अव कसरी होला ? गम्भीर चिन्ताको विषय छ ।
इन्टरनेट र मोबाइलका नकारात्मक असर
पहिले विद्यार्थीलाई इन्टरनेट र मोबाइल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो । समयक्रमले हामी सबैलाई अनलाइन कक्षाका नाममा उनीहरूका लागि इन्टरनेट जोडिदिनुपर्ने, मोबाइल र ल्यापटप किनिदिनुपर्ने विवशतामा पुर्या‍यो । अब किशोरकिशोरी तथा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको दुनियाँमा रमाउने बानी परिसकेको छ । मोबाइल फोनको बढ्दो प्रयोगका कारण उनीहरूको दैनिकीमा समस्या आउन थालिसकेको छ । कतिपयले आफ्नो उमेरअनुसार चाहिने–नचाहिने सामग्री पनि हेर्न भ्याइसकेका छन् । पब्जी लगायतका अनेकौँ गेम र टिकटक जस्ता कुरामा धेरैको नियमितता बनिसकेको छ ।
बालबालिकाहरू घरभित्रै भए पनि आफ्ना अभिभावकसँग टाढिँदै जान थालेका छन् । उनीहरू एउटा कुनामा बसेर एकान्तमा गेम खेल्न वा अन्य कुरामा रमाउन अभ्यस्त भैसकेका छन् । मोबाइल फोनको प्रयोगसँगै उनीहरूमा लगातार मोबाइल फोनमै झुन्डिने, झोक्राउने तथा घरमै भएर पनि परिवारका सदस्यसँग धेरै घुलमिल नहुने, बोल्दा पनि झर्किने खालका समस्या देखिन थालेका छन् । अब उनीहरूलाई सो रङ्गीन रसातलबाट बाहिर निकाल्न पक्कै पनि केही समय अवश्य लाग्नेछ । अभिभावक र विद्यालयलाई यो ठूलै चुनौती भएको छ ।
अनलाइन कक्षाका नाममा लगातार मोबाइलको प्रयोगले तनाव, चिन्ता तथा बेचैनी र उदासीनता बढ्दै गएको छ । निद्राको समस्या, थकान महसुस हुनु, कुनै कुरामा राम्ररी ध्यान केन्द्रित गर्न कठिन पर्ने समस्या आएका छन् । टाउको दुख्ने, आँखा खराब हुने र घाँटी दुख्नेजस्ता रोग बढ्न थालेका छन् । उनीहरूमा मौलिकता, सिर्जनत्मकता, शारीरिक सक्रियता हराउदै अल्छीपना र मोटोपना बढ्न थालेको छ । अनलाइन शिक्षाबाट बालबालिकालाई केही हदसम्म राहत भए पनि समग्रमा तात्कालीन र दीर्घकालीन अनेक नकारात्मक असर देखिन थालेका छन् । यी असरहरूको समाधान कसरी गर्ने ? सोच्नैपर्ने भएको छ ।
यी कुरा कसैले सिकाएन :
आजसम्म हामीले औपचारिक शिक्षालाई मात्र प्रमुख ठान्यौँ र सर्टिफिकेटका आधारलाई मात्र प्राथमिकता दिइराख्यौँ । फलस्वरूप सबै स्कुलहरूले विद्यार्थीलाई पुस्तक रटानमै बढीे केन्द्रित गरे । सबैले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, संस्कार आदिको बारेमा सिकाउनुपर्ने थियो तर उनीहरूलाई गणित वा विज्ञानका सूत्रहरु वा अंग्रेजीका शब्दहरू रटाइयो । बालबालिकाहरूलाई हाम्रो संस्कार–संस्कृति, पारिवारिक मानसम्मान, मर्यादा, अभिवादनको तरिका र त्यसको मूल्य–मान्यताका बारेमा जानकारी नै गराइएन । यस्ता कुरा न त विद्यालयले सिकायो न त अभिभावकले नै त्यो बालमष्तिष्कमा राखिदिन भ्याए ।
आफ्नो विद्यालयको तहगत नतिजा अरू विद्यालयको भन्दा कसरी उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामै सीमित भए विद्यालयहरू । सामाजिक दायित्व र व्यावहारिक कुरा सिकाउनेतिर खासै पहल भएन । प्राकृतिक प्रकोप र अचानक आइपर्ने विपत्तिबाट व्यावहारिक रूपमा कसरी बच्ने भन्ने शिक्षा कहिल्यै दिइएन । आइपर्ने तमाम संकटका सामना कसरी गर्ने अभ्यास पनि गराइएन । सामाजिक सद्भाव र आपसी मेलमिलाप नै असल मानवीय गुण हुन् भन्ने बोध उनीहरूलाई भएन । मानवीय मूल्य–मान्यता के हुन् ? नैतिकता, आचरण, देशभक्ति र सामाजिक मेलमिलाप र दायित्व के हो ? त्यसबारे न त कहिल्यै पढाइ भयो न त कुनै परीक्षा र मूल्याङ्कन नै ।
आडम्बरी तडकभडकपूर्ण आधुनिकता र खोक्रो किताबीय रटानमै विद्यार्थीहरू सीमित गरिए । संस्कारसहितको व्यावहारिक शिक्षालाई जोड दिइएन । ज्ञान, बुद्धि र विवेकको परीक्षा भएन बरू अरूले भन्दा बढी प्रतिशत वा जीपीए ल्याऊ, अरूलाई जित, आफू अगाडि बढ, अरूलाई पछाडि पार भन्ने नितान्त व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाका कुराहरू उनीहरूको कलिलो मस्तिष्कमा भरिरह्यौं । फलस्वरूप आजका विद्यार्थीहरूमा न त परिस्थितिसँग सामना गर्ने क्षमता विकसित भएको छ न व्यवहारिकता र सामाजिक दायित्वबोध नै । न उनीहरू पूर्णतः राष्ट्रप्रेमी बन्न सकेका छन् न त श्रमप्रतिको सम्मान र लगाव नै । उनीहरूमा पूर्ण सीपको विकास हुन सक्यो न त परिस्थितिको सामना गर्ने क्षमता र बानी नै । फलस्वरूप मुलुकको भविष्यका कर्णधार यतिखेर अन्योलग्रस्त, दिशाहीन, किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा रहेका छन् ।
वैज्ञानिक उपकरणीय देखावटीभन्दा हाम्रो प्राकृतिक खानपान र जीवनशैली नै सर्वोत्तम हो भन्ने ज्ञान न विद्यालयले दिए न त अभिभावकले नै । त्यसैले त आज कलिला मस्तिष्कका बालबालिकामा रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर भएको छ । अचानक आइपरेका समस्यासँग जुधेर सामना गर्ने हिम्मत हुनुपर्नेमा उल्टै हतास र विचलित देखिन्छन् ।
हामीले पैसालाई सुख र श्रमलाई दुःख भनेर बुझायौं । कृषि कर्मको महत्वबारे ज्ञान दिएनौं । फलस्वरूप भौतिक सुविधा र पैसाका लागि नेपालका अधिकांश युवाहरूको लक्ष्य विदेश हुन पुग्यो । युवापलायन देशले भोग्नुपरेको एउटा जटिल समस्या हो ।
अब घरमै सिकाऔँ यी कुराहरू :
कोरोनाका कारण आज सबै बालबालिकाहरू घरमै छन् । प्रायःजसो सबै अभिभावकहरू पनि घरमै हुनुहुन्छ । अब विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पढाइ कहिले हुन्छ भन्न सकिन्न । बालबालिका लक्षित अर्को भेरियन्ट आउँदैछ भन्ने हल्ला चलाइएको छ । कोरोनाविरूद्धको खोप सबैलाई नलगाएसम्म त्रास रहिरहने छ । अनलाइन कक्षाको कुरा त्यस्तै हो ।
बालबालिकाको पहिलो पाठशाला घर नै हो । उनीहरू नै पहिलो गुरू हुन् । तसर्थ औपचारिक–अनौपचारिक, सांस्कारिक, सामाजिक र व्यावहारिक शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अभिभावककै काँधमा आइपुगेका छन् ।
हामीले बालबालिकालाई ‘सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै ’ .... भन्ने मूलमन्त्र सिकायौँ तर कोरोनाले आज मानिस मानिसदेखि नै डराऊ, नजिक नजाऊ भनिरहेको छ । हामीले सामाजिक सद्भाव र सहभाव सिकायौँ तर कोरोनाले एकलभाव भनिरहेको छ । मानिस–मानिसबीच दुरी बढाइदिएको छ । यतिखेर यी दुईबीच सामञ्जस्य मिलाउन जरूरी भएको छ ।
कोरोना कहर, लकडाउन वा कुनै महामारी क्षणिक हुन् तर निरन्तर अध्ययन र व्यावहारिक ज्ञान जीवनभरिलाई हो भन्ने कुरा बालबालिकालाई सिकाउन जरूरी छ । शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहेमा जुनसुकै बाहिरी रोगसँग पनि लड्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान दिन पनि अत्यावश्यक छ । यो भूमिका अब अभिभावकले नै पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हामी सृष्टिका फगत सञ्चालक मात्रै हौं । अनेकौं रोग हामी आफैंले निम्त्याएका कारक तत्व हुन् । हाम्रा आफ्नै जीवनशैली र व्यवहारले हाम्रो शरीरलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ भन्नेजस्ता यथार्थ र अपरिहार्य कुरा अब घरमै पढाइ हुनुपर्छ । कमजोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अनि प्रकृतिविरूद्ध आचरणका दण्डस्वरूप अनेकौं रोगव्याधि र महामारीका प्रकोपहरू आउन सक्छन् भन्ने चेतना बालबालिकाहरूलाई बुझाउनु जरूरी छ ।
औपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण भए पनि जीवन भोगाइ र आचरणसम्बन्धी ज्ञानको महत्व बढी छ । विद्यालयमा कमजोर भनिएका विद्यार्थीहरूले पनि महान् काम गरेका उदाहरणहरू थुप्रै छन् । यो समय आफूलाई चिन्ने र आफ्नो रूचिको विषयलाई तिखार्ने उपयुक्त बेला हो । बालबालिकाहरूको सिकाइ अनुकरणात्मक हुने भएकाले परिवर्तन आफैबाट सुरू गर्दै घरमै सिकाउनु जरूरी भएको छ ।
योगा, प्राणायाम र चिन्तन–मननले जीवन रूपान्तरित गर्न सक्छ । स्वध्यायन नै बौद्धिक र व्यक्तित्व विकासको मूल आधार हो । घरभित्रै खेल्न मिल्ने खेल, बुद्धिचाल, चित्रकला लगायतले रचनात्मक र बौद्धिक विकासमा सहयोग गर्छन् । गाउँखाने कथा, प्रश्नोत्तर, समस्या समाधानजस्ता अभ्यासले बालबालिकामा चिन्तन गर्ने, सोच्ने र समस्या समाधान गर्ने क्षमताको विकास गर्छ । निरन्तर उत्प्रेरणा, व्यवहारमा सकारात्मक परिमार्जन अभिभावकका कर्तव्य हुन् । मोबाइलको ठाउँमा खेल खेलाउने, कहानी भन्ने, बच्चासँग आफू पनि सँगै खेल्ने, चित्र कोर्ने आदि सिकाइका अनेक पाटा हुन सक्छन् ।
अन्त्यमा, श्रमलाई दुःख र पैसालाई मात्र सुख बुझाउने शिक्षा होइन, माटोको मर्यादासहितको श्रमको सम्मान दिने व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षा घरमै सिकाउनुपर्ने बेला हो यो । तसर्थ घरलाई नै विद्यालय बनाऔंँ । आफ्ना बालबालिकालाई उत्साही, सिर्जनशील व्यावहारिक र सीपयुक्त बनाऔँ ।
अन्तिम अपडेट: भदौ १४, २०७८
ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुनुहुन्छ ।
भरतमणि बने 'कमेडी च्याम्पियन २' को विजेता
राष्ट्रिय फुटसल लिग : राइजिङ क्लब र स्पाेर्ट्स क्यासलकाे विजयी स...
पश्चिम सेतीकाे अध्ययनका लागि सरकारी टाेली डाेटीमा
अनेरास्ववियु अध्यक्षमा सुनिता बराल
सङ्घीय संसद् ठिक बाटोमै अघि बढिरहेको छ : सभामुख सापकोटा
कर्णालीवासीले जनप्रतिनिधिलाई साेधे– समिति बनाउने मात्रै हाे ...
हिमाली १० जिल्लामा १८ वर्षमाथिका सबैलाई काेराेनाविरुद्काे खो...
अफगानिस्तानमा एक महिनापछि विद्यालय खुल्याे तर छात्राहरू जान प...
‘माधव नेपालकै सहयाेगमा मुख्यमन्त्री बनेँ, एकीकृत समाजवादीकै ...
८ जनालाई माफी, ५ सय २३ जनाकाे कैद कट्टा
एमसीसीका कारण गठबन्धनमा फाटाे आउँदैन : प्रचण्ड
नेपालले अग्रता जाेगाउन सकेन, फिलिपिन्ससँग २–१ ले हार्‍याे
एमालेबाट चाेइटिएर गएकाहरू समाप्त हुनेछन् : महासचिव पाेखरेल
मलेसियाबाट एकै दिन ६ जनाकाे शव र १५ जनाकाे अस्तु नेपाल ल्याइयो
बैंकहरुले ब्याजदर बढाए, कुन बैंकको कति बढ्यो ?
अन्तरिक्षमा ९० दिन बसेर पृथ्वी फर्किए तीन चिनियाँ यात्री
सुनको भाउ आज एकैदिन १४ सय रुपैयाँले घट्यो
आजदेखि सुपथ मूल्य पसल, के मा कति छुट ?
शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अलपत्र पर्ने त होइन ?
भदौ ३०, २०७८ बुधबार
के हो निपा भाइरस ?
भदौ २९, २०७८ मंगलबार
यस्तो अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ
भदौ २१, २०७८ सोमबार
वैदेशिक रोजगारी मुद्धा र सिडियोको भूमिका
फल्न छाड्यो बैतडीमा स्याउ
खाडीमा पसिना बगाएर फर्कनेले देशमा पाइला टेक्दा शीतल महसुस ग...
‘यो दसैँमा म घर आइँन, सम्झनालाई पठाउन केही पाइँन’
‘प्रहरीले हतकडी लगाएर विमानस्थल लग्यो, कम्पनीले पासपोर्ट ल्याइद...
भदौ १७, २०७८ बिहिबार